Gambit coin စျေး - အွန်လိုင်း GAM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Gambit coin (GAM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Gambit coin (GAM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Gambit coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $376 501.00
volume_24h_usd: $2 049.58
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Gambit coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Gambit coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Gambit coinGAM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.717Gambit coinGAM သို့ ယူရိုEUR€0.608Gambit coinGAM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.55Gambit coinGAM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.654Gambit coinGAM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr6.41Gambit coinGAM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.53Gambit coinGAM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč15.9Gambit coinGAM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.68Gambit coinGAM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.95Gambit coinGAM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1Gambit coinGAM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$16.03Gambit coinGAM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$5.56Gambit coinGAM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$3.9Gambit coinGAM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹53.6Gambit coinGAM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.120.73Gambit coinGAM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.983Gambit coinGAM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.09Gambit coinGAM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿22.28Gambit coinGAM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥4.97Gambit coinGAM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥76.62Gambit coinGAM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩848.49Gambit coinGAM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦274.83Gambit coinGAM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽52.93Gambit coinGAM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴19.73
Gambit coinGAM သို့ BitcoinBTC0.00006 Gambit coinGAM သို့ EthereumETH0.00187 Gambit coinGAM သို့ LitecoinLTC0.0132 Gambit coinGAM သို့ DigitalCashDASH0.0079 Gambit coinGAM သို့ MoneroXMR0.00805 Gambit coinGAM သို့ NxtNXT55.92 Gambit coinGAM သို့ Ethereum ClassicETC0.106 Gambit coinGAM သို့ DogecoinDOGE206.9 Gambit coinGAM သို့ ZCashZEC0.0087 Gambit coinGAM သို့ BitsharesBTS22.09 Gambit coinGAM သို့ DigiByteDGB22.94 Gambit coinGAM သို့ RippleXRP2.55 Gambit coinGAM သို့ BitcoinDarkBTCD0.0247 Gambit coinGAM သို့ PeerCoinPPC2.38 Gambit coinGAM သို့ CraigsCoinCRAIG326.67 Gambit coinGAM သို့ BitstakeXBS30.57 Gambit coinGAM သို့ PayCoinXPY12.52 Gambit coinGAM သို့ ProsperCoinPRC89.96 Gambit coinGAM သို့ YbCoinYBC0.000385 Gambit coinGAM သို့ DarkKushDANK230.09 Gambit coinGAM သို့ GiveCoinGIVE1552.86 Gambit coinGAM သို့ KoboCoinKOBO163.34 Gambit coinGAM သို့ DarkTokenDT0.66 Gambit coinGAM သို့ CETUS CoinCETI2070.77
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 23:55:02 +0000.